Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ọbịa ọbịa » Nbili nke ọnụ ahịa carbon
Ka nchegbu mgbanwe ihu igwe na -eto, ụlọ ọrụ na -eche usoro gọọmentị siri ike nke na -ata ha ahụhụ maka oke ikuku carbon. Ahụhụ ndị a na -abịakarị n'ụdị mmefu ego ma bụrụkwa nke a na -akpọkarị ụtụ carbon.
Ụfọdụ ụlọ ọrụ na -emegide ụtụ carbon.
Ndị ọzọ maara ihe kpatara eji etinye ụtụ isi a ma na -agbalị ibelata anwuru.
Otu ụzọ a na -ahụkarị bụ ihe a na -akpọkarị dị ka ọnụ ahịa carbon n'ime.
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ọnụahịa carbon na -emetụta ụlọ ọrụ na -etinye uru ego na anwuru ọkụ ha. Ọ bụ ezie na ọnụahịa a bụ usoro iwu, ọ na -agwa ọtụtụ mkpebi ma na -enyere ụlọ ọrụ aka ịnọpụ iche carbon.
Ọ bụghị ihe ijuanya, ọtụtụ ụlọ ọrụ na -anabata echiche nke ụtụ carbon. Dika ihe ngosi Carbon Disclosure Project (CDP) si kwuo, ihe karịrị ụlọ ọrụ 2,000, na -anọchite anya ihe karịrị ijeri US $ 27 na isi ahịa, kpughere na ha na -eji ọnụahịa carbon n'ime ma ọ bụ atụmatụ ime otu n'ime afọ abụọ na -abịanụ.
Ugbu a, ọnụ ahịa carbon n'ime bụ ihe a na -ahụkarị na ụlọ ọrụ ike, ihe na ọrụ ego.
Ọnụ ego carbon dị n'ime na-enyere ụlọ ọrụ aka itinye ọnụahịa ahịa na-ebunye nnukwu carbon, ọbụlagodi mgbe imirikiti ihe ha na-eme ugbu a dabere na amụma ọnụahịa carbon na mpụga yana ụkpụrụ metụtara ya.
Ụlọ ọrụ na -eji ọnụ ahịa dị n'ime ụzọ ndị a:
Iji metụta mkpebi gbasara mmefu ego isi obodo, ọkachasị mgbe oru ngo na -emetụta oke ikuku, ọkachasị mgbe ọrụ na -emetụta ikuku, nchekwa ọkụ, ma ọ bụ mgbanwe na mkpokọta nke isi ike.
Iji tulee, kpụọ, ma chịkwaa ihe egwu ego na nhazi nke sistemụ ọnụahịa gọọmentị dị adị yana enwere ike.
Iji nyere aka chọta ihe egwu na oghere yana gbanwee atụmatụ ya.
Ọnụahịa ahọpụtara n'ime ụlọ na -egosi ụtụ isi carbon dị ugbu a ma ọ bụ ego amachibidoro n'ikike ha maka ụfọdụ òtù. Ụfọdụ ụlọ ọrụ nwere ike ha agaghị arụ ọrụ na mpaghara nwere amụma doro anya ọnụ ahịa carbon.
Ọnụ ahịa ndị ụlọ ọrụ na -ahọrọ n'ụwa niile na -adịgasị iche nke ukwuu, ụfọdụ ụlọ ọrụ na -akwụ carbon dị ka otu narị ton. N'ụzọ dị iche, ndị ọzọ na -enyocha ya karịa $ 100 kwa tọn.
Ọnụahịa carbon ahọpụtara dabere na ụlọ ọrụ, obodo na ebumnuche ụlọ ọrụ ahụ. Tupu anyị akọwa ụzọ dị iche iche ụlọ ọrụ si eji ọnụahịa carbon dị n'ime, ọ dị mkpa ịghọta ka ha si ekpebi ọnụ ahịa carbon.
Ịlele nzọ ụkwụ Carbon
Mgbe ị na-aga, ụlọ ọrụ kwesịrị inwe nghọta doro anya nke ha emepụta.
Ọ bụ ezie na mba na steeti dị iche iche anabatala ụkpụrụ gburugburu ebe obibi dị iche iche na ọnụ ahịa carbon, ụlọ ọrụ na -ekpebi oke na ọnọdụ ọnọdụ nke ikuku CO2 ha na -apụtachaghị ìhè. Ụlọ Ọrụ Nchebe Gburugburu Ebe Obibi nke United States (EPA) na -ejikwa akụkọ banyere anwuru ọkụ sitere na ụlọ ọrụ ike na ndị nrụpụta na United States.
Mwepu ikuku ma ọ bụ oke ikuku sitere na isi mmalite nke ụlọ ọrụ ahụ nwere ma ọ bụ na-achịkwa ya-dịka ọmụmaatụ, anwuru ọkụ sitere na ọkụ ọkụ n'ime igwe ọkụ ọkụ abụọ ma ọ bụ n'ụgbọ ala ụgbọ ala ya. Ụzọ ị si enyocha ikuku ndị ahụ ga -adabere na isi mmalite ya. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike iji anwụrụ ọkụ sistemụ nleba anya ikuku na -aga n'ihu (CEMS) iji soro mmepụta carbon. Ndị nyocha CEMS nwekwara ike soro gas dị ka NOx, SO2, CO, O2, THC, NH3, Na ndị ọzọ.
Ihe ọkụ ọkụ abụọ na -apụtachaghị ìhè sitere na ọkụ eletrik ụlọ ọrụ, ọkụ, uzuoku, na jụrụ oyi.
Mgbapụta ndị ọzọ na -apụtachaghị ìhè (oke 3) na -eme na eriri ọkọnọ nke ụlọ ọrụ, dị ka imepụta na ibuga ihe zụrụ na mkpofu ahihia. Ọdịiche dị n'etiti ikuku anwuru ọkụ na nke na-apụtachaghị ìhè na-egosi na ọbụlagodi ụlọ ọrụ na-anọghị na ụlọ ọrụ na-ekpo ọkụ carbon nwekwara ike ịza ajụjụ maka oke ọkụ.
Carbon dị n'ime na -ewekarị otu n'ime ụdị atọ ndị a:
Ụgwọ carbon dị n'ime
Ụgwọ carbon dị n'ime bụ uru ahịa nke tọn ikuku carbon ọ bụla nke ngalaba niile na nzukọ a kwenyere. Ọnụ ego ahụ na -emepụta ọwa ego etinyegoro aka iji kwado usoro dị iche iche ewepụtara iji belata nsị.
Ọnụ ego maka ụlọ ọrụ na-eji ego carbon dị n'ime sitere na $ 5- $ 20 kwa metric ton. Isetịpụ ọnụahịa chọrọ ịtụle ihe dị iche iche n'ofe azụmaahịa kwekọrọ n'ụtụ isi etinyere yana isi ụzọ enwere ike nweta ego.
Enwere agwa dị iche iche nke ụdị ọnụ ahịa carbon a, dị ka ịhazi usoro ego na azụmaahịa nke na -eulatesomi usoro mpụga dịka atụmatụ azụmaahịa ikuku nke EU. Ego a na-ebulite site na usoro a ka etinyere na nkwalite na mbelata carbon.
Ọnụ ego ndo
Ọnụahịa nke onyinyo bụ usoro iwu ma ọ bụ nke a na -eche na otu tọn ikuku anwuru ọkụ. Site na usoro ọnụ ahịa onyinyo, a na -agbakọ ọnụ ahịa carbon n'ime ihe azụmaahịa. Nke ahụ nwere ike ịgụnye nyocha ikpe azụmaahịa, usoro nnweta, ma ọ bụ mmepe iwu azụmaahịa iji gosipụta ọnụ ahịa carbon. A na -ezigara ndị njikwa ma ọ bụ ndị nketa ihe ọnụ ahịa nke sochiri ya.
Dị ka ọ na -adị, a na -atụnye ọnụahịa ahụ n'ogo nke na -egosipụta ọnụ ahịa carbon ga -eme n'ọdịnihu. Ọnụ ego ndo nke usoro carbon na -enyere azụmahịa aka ịghọta ihe egwu carbon wee hazie onwe ha tupu ọnụahịa onyinyo wee bụrụ ọnụ ahịa ya. Ọ nwere ike ịdị mfe ịme ọnụahịa ndo n'ime azụmaahịa ebe enweghị mgbanwe na akwụkwọ ọnụahịa ngalaba ma ọ bụ nkwekọrịta ego.
Ọnụ ego a na -akwụghị ụgwọ dabere na ego ụlọ ọrụ na -emefu iji belata ikuku anwuru ọkụ ma ọ bụ ọnụ ahịa ịgbaso iwu gọọmentị. Dịka ọmụmaatụ, ọ nwere ike ịbụ ego ụlọ ọrụ na -emefu mmeghari ohuru ike.
Ọnụ ego a na -edoghị anya na -enyere ndị ọchụnta ego aka ịchọpụta ma belata ọnụ ahịa ndị a ma jiri ozi enwetara iji ghọta akara ukwu carbon ha. Ọnụ ego carbon na -apụtachaghị ọnụ nwere ike tọọ ụkpụrụ tupu ịmalite iwebata mmemme ịnye ọnụahịa carbon maka ụlọ ọrụ ụfọdụ.
Uru ịtọ ọnụahịa Carbon dị n'ime
Isetịpụ ọnụahịa carbon n'ime nwere ike ịnye nnukwu uru. Ha gụnyere:
Ịmepụta echiche carbon ka ọ bụrụ isi okwu maka ọrụ azụmaahịa.
Na -echebe ụlọ ọrụ ahụ megide ọnụahịa carbon n'ọdịnihu
Ọ na -enyere ụlọ ọrụ aka ịchọpụta ma ghọta ihe egwu carbon na carbon na azụmaahịa
Ọdịda na-echekwa atụmatụ azụmaahịa n'ọdịnihu
Na -ewepụta ego maka isi mmalite ume ọhụrụ
Na -emepụta mmụọ n'ime na n'èzí
Na -enye ndị ahịa na ndị na -etinye ego ihe ngwọta maka nchegbu ha nwere mgbanwe ihu igwe
Na -ebelata ikuku anwuru ọkụ
Ọnụahịa carbon dị n'ime nwere ike rụọ ọrụ dị ka ngwa mbelata ihe egwu nwere ọtụtụ uru na mpụga ọrụ ụlọ ọrụ, ndị ahịa na gburugburu. Mgbe ejikọtara ya na ụzọ ndị ọzọ, ụlọ ọrụ ga-enyere aka kwalite mgbanwe mgbanwe carbon dị ala nke ukwuu.